UTintin, ubuyela ebuntwaneni - uGeofumadas
Tintin, buyela ebuntwaneni
NgoJanuwari, 2012 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Bekumnandi ukubona imovie Tintin, Imfihlo ye-Unicorn ekhutshwe kule veki kule meko ikuMbindi Merika.
Nangona ungumlinganiswa ohlekisayo waseYurophu, onekopi yokuqala yakhe yaphuma kwiminyaka ye-30 Le Petit VingtièmeNdikhumbula ndiyifunda xa ndisesesikolweni, edolophini ndilibele malunga nempucuko apho unoncwadi wasemartin wenza ubumnandi kwaye asizise iincwadi ekhaya. Andinalwazi lokuba bafike njani apho, kodwa ndiyakhumbula ukuwafunda nokuwafunda kwakhona kunye nabantakwethu de ndaphantse ndawazi ngentliziyo, lawo mabali ahlala kwizikhumbuzo zethu kwaye abuye mihla le esithi umoya ufuna ukuziva njengomntwana kwakhona ...
Ayizizo zonke iziqendu kwaye andizange ndibabone kwakhona kwade kwadlula iminyaka embalwa endikhubeka kwivenkile eAmsterdam, akunakwenzeka ukuba sixhathise isilingo. Endleleni ebuyayo, sibahlafunile kunye nabantwana bam de badiniwe, ke xa babhengeza le filimu babewuhlukumeza lo mhla kwaye bezisola ukuba kutheni le nkulumbuso ingekho ngaxeshanye kuwo onke amazwe. Umninawa wam wayefuna ukundixelela kuFacebook xa ebona intengiso kumabonakude, kodwa bamxelela ukuba iphelelwe lixesha kwaye sele ikhutshiwe kwamanye amazwe.
Ke namhlanje, emva kokubuyela esixekweni esine-cinema, kunye ne-Nachos efakwe itshizi kunye nepopcorn sonwabele usuku emva kwemini, iholide yokugqibela endiyishiyileyo. Xa ndaxelela intombazana yam ukuba ukukhutshwa kokuqala kuphuma kwi-1930, yahleka, iqonda imfashini yeento ezibonisa ukuba ghettos kwaye irony of plume ebunzini ngoku inje ngefashoni.
Uhlengahlengiso lenze iinguqu ezininzi, ndicinga ukuba ukwenza iskripthi sibanzi ngakumbi kwaye sinomdla. Kulapho ndaye ndazi khona ukuba amakhwenkwe am alazi ibali ngentliziyo emva kokuphazamiseka ngalo lonke ixesha:
Kwincwadi kaHernández kunye noFernández bathenga ii-canes bambe iiwallet zabo ...
Abayichazanga intaka ...
Ayikaze yaziwe into yokuba omnye umthengi wenqanawa ngumphandi ...
Le asiyondlela abayibamba ngayo ilaphu.
Ewe kunjalo, ayifani ne comic, kodwa iyelenqe lilungelelaniswe kakuhle; ngokungathi abavalelanga uTintin endlwini kodwa kwisikhephe apho wadibana khona noKapteni Haddock. Umhle kakhulu umzobo weKapteni okhangela abaququzeleli abanesitayile ngesandla, akunjalo kwi-comic, endaweni yoko iilungelelwaniso zivela kwindawo ecekeceke yenqanawa.
Ngapha koko, mva kwemini.
Kulungile ukuba ubuye.
Ndishiya imifanekiso ... isuphu yokutya kwaselwandle, Amapala elunxwemeni kunye neZiko lezeMbali.
Post edlulileyo«Edlulileyo Izifundo ze-GIS kwi-Intanethi, ngesiSpanish, ezinye zikhululekile
Post Next I-Plex.Earth, umzekelo omhle wokungena kwimakethe yaseSpeyinOkulandelayo "
I-3 iphendula "nguTintin, ubuyela ebuntwaneni"
Unyaka omtsha onwabisayo
UCarlos Guzman uthi:
Ndicinga ukuba kulungile, kuba iphinda icaphule iimeko ezithile apho uTin Tin kunye nabahlobo bakhe badlula khona abaninzi,
Molo Don G! Uyolo 03! Nanini na xa ndibona isuphu yokutya kwaselwandle ndiyithi: 'Ndicinga ukuba akunakwenzeka ukuyigqiba yonke' 🙂